Vegetables Archives - ဆီးချို Recipes ဘလော့
သငျသညျကိုယ်အလေးချိန်နှင့်သင်တို့၏အသက်ရှည်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာ၏အရေးပါမှုကိုသိကြ. ဒါပေမယ့်, သင့်ရဲ့အစားအစာကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါကြွယ်ဝပါလျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်နိမ့် taurine အဆင့်ဆင့်ရှိ. As we age, Taurine amino acid production by the body also decreases. Why is…
truffles ကအလွန်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်သော်လည်း, ထိုသို့ခဲဖွယ်စားဖွယ်ကိုစားရရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သောအမှန်တရားကိုကနေမပါဘဲစားရန်အများအပြားပိုပြီးအကြောင်းရင်းများယခုရှိပါတယ်. One of these reasons is you are consuming truffles because these may bring you health benefits. Through the years, …
ကျန်းမာသောစားသောက်တဲ့အစားအစာအပြင်ကိုလောင်မုန်လာဥနီသီးဖျော်ရည်ကိုသွေးဖိအားပြဿနာများနှင့်အတူသူတို့အားအလွန်အကျိုးရှိစေနိုင်သည်. High blood pressure can be lowered with continued treatment that lastsalifetime. But wouldn’t it be better to prevent high blood pressure in the…
သစ်သီးများတစ်ဆီးချိုရောဂါသားကောင်များ၏အစားအသောက်များတွင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ. ဆီးချိုရောဂါတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးချင်းစီဆငျးရဲဒုက်ခဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့သကြား၌ကြွယ်ဝဖြစ်ကြောင်းသီးအပွစားခြင်းကြဉ်ရှောင်. There are many fruits out there which are low on fat contents and rich in nutrients and…